“Bangiyada reer galbeedku haddii ay joojiyaan wada-shaqeynta xawaaladaha, waa cunaqabateyn hor leh oo la saarayo Soomaaliya,” M.weyne Faroole | Salaan Media
“Bangiyada reer galbeedku haddii ay joojiyaan wada-shaqeynta xawaaladaha, waa cunaqabateyn hor leh oo la saarayo Soomaaliya,” M.weyne Faroole
August 12, 2013 | Published by: Hamse
Garoowe 12.Aug (SM) Madaxweynaha maamulka Puntland ayaa ka codsaday bangiga Barclays inuu ka laabto go’aankii uu ku joojiyay wada-shaqeynta kala dhaxeysay shirkadaha xawaaladaha ee Soomaaliya.
“Bankiyada reer galbeedku haddii ay joojiyaan wada-shaqeynta xawaaladaha, waa cunaqabateyn hor leh oo la saarayo Soomaaliya,” ayuu yiri madaxweyne Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed Faroole oo ka hadlayay shir maanta ka dhacay Garoowe.
Shirka ayaa ku saabsanaa hannaanka isticmaalka lacagta la isugu xawilo taleefoonnada gacanta, kaas oo ay soo wada qabanqaabiyeen hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan la dagaallanka daroogada iyo dambiyada ee UNODC iyo Bangiga Adduunka.
Shirka waxaa goob-joog ahaa shirkadaha xawaaladaha iyo kuwa isgaarsiinta ee Soomaaliya.
Madaxweynaha wuxuu sheegay in haddii aysan xawaaladaha lacagta jireen ay wax badan khaldami lahaayeen, isagoo tilmaamay in nolosha boqollaal kun oo qoysas ah ay ku tiirsan tahay lacagta loogu soo diro xawaaladaha.
Wuxuu ku baaqay in xal deg-deg ah loo helo arrintan, isagoo walaac ka muujiyay in ay tallaabadan cawaaqib aan wanaagsaneyn ku yeelan karto bulshada Soomaaliyeed.
Faroole ayaa ku ammaanay shirkadaha xawaaladaha iyo isgaarsiinta inay hayaan shaqo u dhiganta midda bulshada caalamku ay u qabatay Soomaaliya.
Dibadbaxayaal isugu jira Soomaali iyo kuwa aan Soomaali ahayn ayaa Arbacadii xafiiska raysul wasaaraha Britain David Cameron u gudbiyay codsi ay saxiixeen 25,500 oo qof oo uu ku jiro orodyahanka caanka ah ee Mo Farah, kaas oo looga dalbanayay Bangiga Barclays inuu sii wado adeegga uu siiyo shirkadaha xawaaladaha Soomaalida.
Bangiga Barclays ayaa tallaabada uu ku joojiyay adeegyada xawaaladaha ku tilmaamay mid uu ku joojinayo lacagta sida sharci darrada ah la isugu diro.
Soomaalida ku nool dalalka qaniga ah ayaa lacag u dira eheladooda ku sugan Soomaaliya si ay isaga bixiyaan lacagta iskuulka, daryeelka caafimaadka iyo cuntooyinka aasaasiga ah.